Dood ka taagan barashada afka hooyo iyo heesaha dhallaanka lagu baro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kulankii sannadlaha ee macallimiinta afka soomaaliga. Sawirle: Kenadid Maxamed/Radio Sweden SR
Dood ka taagan barashada afka hooyo iyo heesaha dhallaanka lagu baro
La daabacay onsdag 29 oktober 2014 kl 15.02
Sannadihii ugu dambeeyey ayey aad kor ugu kacayeen tirada macallimiinta soomaalida ee dhigta maadada afka hooyo, middaasina ugu wacan tahay tirada dhallaanka soomaaliyeed ee dalka socdaalka ku imaneeysa oo aad u fara badatay, sida uu sheegay Cumar Aadan Cumar, ahna isku duwaha xiriirka macallimiinta dhigta afka hooyo ee waddammada Skandinavien-ka oo aan wareeysi kula yeelanay mar uu ka qayb galayay kulan-sannadeedkii macallimiinta afka hooyo ee sannadka 2014 oo ka dhacay magaalada Stockholm 27-28-kii oktoober ee 2014.
Kor u kaca tirada macallimiinta soomaalida ee u dhigta dhallaanka luuqaddooda hooyo ayaa la oran karaa iney ku jirto faa'iido, maadaama ay dabooshay baahi badan ee taagneeyd, sida uu sheegay Cumar Aaden Cumar. Halka dhanka kale ay jiraan caqabado ka dhasha kor u kaca macallimiinta. Cumar Aden Cumar iyo mar kale:
Kulan-sannadeedka macallimiinta af-soomaaliga dhiga ee sannadka oo socday laba maalmood ayaa ajndeyaashii xoogga lagu saarey ey ahaayeen laba arrimmood. Maalinta koowaad oo looga xaajoonayey dhallaanka dalka ku cusub sidii gacan loogu siin lahaa wax-barashada iyada oo loo mareyo luuqaddooda hooyo. Halkaasina oo ey ka sinnaayeen dhammaan macallimiinta luuqadaha kala duwan. Maalintii xigtay ee salaasada ayey gooni kulan u yeesheen macallimiinta dhigta luuqadda hooyo ee waddammada dhaca waqooyiga Yurub iyo sidii ey waayo-arag-nimadooda isu weeydaar-san lahaayeen:
Doodo iyo waayo-arag-nimo ayaa la isku dhaafsadey goobtii uu ka dhacayey kulanka macallimiinta afka hooyo ee waddammada dhaca waqooyiga Yurub. Doodaha ugu cadcaddaa ee la isku mari waayey ayay ka mid ahayd dood la xiriirtay isticmaalka muusikada ee barashada luuqadda hooyo, halkaasina oo dadka qaarkii qabeen in aaney ahayn wax wanaag-san, halka dadka qaarkii ey middaasi diidanaayeen sheegeenna in xaaraanta iyo xalaasha muusikada ey salka ku haysop goolka laga leeyahay falka.
" Heesta iyo muusiiku waxey xaaraan yihiin kolka rag iyo dumar la isku qooqineyo", ayuu macallinkaasi sheegay mar uu ka warramayey su'aal ey weeydiiyeen ardey fasallada sagaalaad dhigata oo wax ka weeydiisey heesaha iyo muusikada sida uu macallinkaasi u arko.
Fowsiya Xaaji Maxamuud waxay muddo siddeed sannadood ah ku soo howl-galeeysay macallin dhiga luuqadda hooyo. Waxay sheegtay iney diidmo kala kulmaan waalidiinta qaarkood oo tiraahda in aaney wax muusik ah ilmaha maqashiin inta ey baranayaan maadada luuqadda hooyo. Inkasta oo Foowsiya Xaaji Maxamuud qudheedu ka soo hor-jeeddo muusikada diin ahaan aanay dhanka kale dhibaato u arag muusikada ku jirta heesaha dhallaanka lagu baro luuqadda hooyo:
Nimca Ducaale waxay muddo 18 sannadood gaarsiisan ku soo howl-galeeysay howsha macallin-nimo ee afka hooyo. Intii aanay burburin daladdii Soomaaliya ayay Nimco sdoo kale ka soo baxday jaamicaddii macallimiinta ee Lafoole iyadoo sidoo kale ka soo howl-gashay akadeemiyadii Soomaaliya. Nimca Ducaale waxay fajac ka muujisay waxa lagu diiddan yahay heesaha dhallaanka lagu baro luuqaddooda ee muusikadu ku dheehan tahay, iyadoona is weeydiisay tan iswiidhishkaba inaan hadal laga keenin ee in waxa la diiddan yahay ay tahay tan soomaaliga iyo in kale:
In ilmaha loo heeso yaraantoodaba si afka loogu baro, waa wax loo baahan yahay, hase yeeshee maaha macnaheedu in muusik iyo biro la tumeyo ku jiraan.. Waa su'aal dadka u taala oo fikirro kala duwan laga qabo. Waa sida uu aamin-san yahay Cumar Aaden Cumar, ahaana isku duwihii kulan-sannadeedkii macallimiinta afka hooyo ee waddammada dhaca waqooyiga Yurub:
Su'aashu waxay haddaba tahay muxuu nidaamka iskuulka Sweden ka qabaa middaa?. Maxay waalidiintu awood u leeyihiin, muxuuse macallinku awood u leeyahay?. Waalidku saameeyn ma ku yeelan karaa cashar-bixinta macallinka?.